ဂေါ်လီ ထည့်တယ်ဆိုတာ အောက်တန်းစားတွေ လုပ်တာ | ATK's Explicit Blog
from → Abnormality, Dicussion, For Men, Q&A, STD
← ယောက်ျားတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ဆို လူစဉ်မီသလဲ
အထူး မေတ္တာရပ်ခံချက် →
ပိုးစိုးပက်စက်ကို ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေး ပါ ဆရာ။အရမ်းကို လေးစားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ ကျန်းမာပါစေ……………………………………………………
တော်တော်မှကြိုက်နေ ဖြစ်ဖူးလို့ နေမှာဟုတ်လား သူငယ်ချင်း
Kyaw zin permalink
ဆရာနဲ့ထပ်တူသဘောတူ ခံစားမိပါတယ် ခင်ဗျာ။ဆရာပြောခဲ့တဲ့ အချက်တော်တော်များများကတော့ ခုမှသိတာပါ။အဲဒီအတွက်ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ။
ဆရာရေးသားတဲ့ထဲမှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ အောက်တန်းကျတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ပြောနေတာ ဂေါ်လီထည့်ထားရင် အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဆက်ဆံမှုပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒါဟုတ် မဟုတ်ဆိုတာ သိရင် ပြောပေးကြပါ။
ယောက်ျားအတော်များများက ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့ မိန်းမ မချိမဆန့်ဖြစ်နေရင် ကောင်းနေတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်တတ်တာကိုး။ ဒါပေမယ့် နာကျင်တဲ့အခါမှာလည်း မချိမဆန့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဂေါ်လီဟာ သဘာဝမဟုတ်တဲ့အတွက် အတွင်းသားနံရံတွေကို ကသိကအောင့်ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို အရှင်းဆုံး သိချင်ရင်တော့ မိမိရဲ့ ခံစားရအလွယ်ဆုံး နေရာတစ်နေရာရာ၊ ဥပမာ ခါးတို့၊ ချိုင်းကြားတို့၊ ပေါင်ကြားတို့မှာ ဂေါ်လီလုံး သေးသေးလေး တစ်လုံးနှစ်လုံး မြှုပ်ထားတဲ့ တုတ်လို အရာတစ်ခုခုနဲ့ ဖိပွတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒါဆို ကိုယ်ချင်းစာတတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောတာဟာ ယုံတမ်းစကားပါခင်ဗျား။
ကလေးတွေဆော့တဲ့ ဘောလုံးလို လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်း အရာလေးတွေကို ခေါ်တာပါဗျာ 😀
ဟီးးး တော်တော်သိတာပဲ သုံးဖူးတယ်ထင်ပ ဟီးးးး
ဟားဟား တော်တော် ကြီးတာပဲနော်
အဲလောက်ကြီးမကြီး ပါဘူးဗျာ သေးသေးလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုံး(သွေး)ထားတာပါ လက်သန်းလက်သည်းခံလောက်တော့ရှိမယ်ထင်ပ ။ တချို့ က အထောင့်တွေလဲသုံးတယ် အထောင့်က ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြပြန်ပြန်တယ် ၊ တစ်ချို့ က အလုံး တဲ့ ဟီးး ကြားဖူးမြင်ဖူးတာပြောတာနော် …. ဟီးး
One sick post 😀 respect sayar ATK 😀
အဲဒီ့ ဘောလုံးလို လုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ဘယ်လိုလုပ်အချောင်းထဲကိုထည့်တာလဲ…..မသိလို့ရှင်းပြပေးပါနော်
ဓါးနဲ့ ခွဲပြီး ပြီးထည့်တာ ဇွန်းနဲ့ ဖောက်ပြီး ထိုးပြီးထည့်တာ ၊ သွားပွတ်တံ အချွန်နဲ့ ဖောက်ပြီးထိုးထည့်တာ ၊ ကြေး ချောင်းအချွန်နဲ့ ဖောက်ပြီးထိုးထည့်တာ…. လိင်တံ ရဲ့ အကြော နဲ့ အရေပြားကြားထဲမှာထည့်တာ .၁ ပတ်တိတိ ရေမထိရဘူး ၊ ဆရာ့ကို အဖြေကျပ်အောင်မမေးစမ်းပါနဲ့မေးချင်ရင် အနော့ဆိုဒ်ထဲလာပြီးမေးပါ ။ ဆရာ့ကိုယ်စား သိသလောက်ဖြေပေးပါ့မယ်…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာနတ်သားလေးခင်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း ကျေးဇူးမတင်လှဘူး ခင်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Thank you, but no thank you. ပေါ့။ လူ့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှာ မဆို ပြင်ပပစ္စည်း (foreign object) တစ်ခုခု ထည့်သွင်းခြင်းဟာ ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန်များကသာ လိုအပ်လွန်းလို့ မလွှဲမရှောင်သာ လုပ်ပေးရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ငါကွဆိုပြီး မထော်မနန်း အစွမ်း ပြချင်ဇောကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး အရပ်သားတွေ မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်များလှတဲ့ သည်လိုလုပ်ရပ်မျိုးကို အားပေး အားမြှောက်ပြုရာရောက်တဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ကျွန်တော် သဘောမတူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ပိုင်း ဒါမျိုးတွေပဲ ဆက်ရေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ moderate လုပ်တော့မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း အားနာနာနဲ့ ပြန်ကြားပါရစေ ဆရာ နတ်သားလေးခင်ဗျား။
ဖန်ဒိုးအသေးထက် နည်းနည်တော့ သေးတယ် အဲ့ အလုံးလေးက..ဘယ်လို ထည့် တာလဲဆိုတော့လက်ဖ္ဘက်ရည်ဇွန်းကို ပါ့းပါးလေးဖြစ်အောင်သွေး၊ သွေးပြီးရင် ဇွန်းဖင်မှာ ဂေါ်လီလုံးလေးတင်… ပြီးရင် ကိုယ်ထည့် ချင်တဲ့ နေရာကို ပွတ်ပြီတော့ထိုးလိုက်ရင် ပြီးသွားပြီ……… ရှင်းတယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ ခဏခဏတွေ့ရတယ် တချို့ဆို silicon တွေထိုးထည့်ထားတား ပြီးတော့foreign bodyပဲ ဒုက္ခပေးပြီလေ ပြန်ခွဲပစ်ရတာ နဂိုရှိတာလေးတာင် ပုံစံပျက် သွားတယ် ဘယ်သူအတွက် ကိုယ့်ကိုယ် ဒုက္ခခံ
လဲ မသိပါဘူးဆရာ ရယ်
May Oo permalink
HIV + ဖြစ်နေပြီဆိုတာအမြန်ဆုံးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲခင်ဗျာ
HIV ပိုး ရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက် သုံးလကျော် အကြာမှာ သွေးစစ်ကြည့်ပြီးမှသာ သိရနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ထားသည်ကို ဂုဏ်ယူသူတစ်ဦးအား ဖတ်ပြရန် book mark ယူထားပါသည်
သဘာဝ ရှိရင်းစွဲတရားကို ကျော်ပီးလုပ်ချင်နေတာကိုက စိတ်မူမမှန်မှုတစ်ခုခုလို့ ထင်ပါတယ် ထမင်းမလွတ်လို့ ရူးတယ်ပြောမရတာလေးတစခုပါပဲ
တခါတလေပဲကောင်းပါတယ်၊ (၂ ယောက်လုံးအတွက်) လင်နဲ့မယားဆက်ဆံရေးမှာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ၂ ယောက်လုံးနာကျင်ခံစားရမှာပါ။
ဆရာ စာပို့ထားတာရလား မသိဘူးဗျ။connetion ကြောင့်မရမှာဆိုးလို့ပါ
ရပါတယ်။ ကိုးနတ်ရှင်ကတော့ ဆိုးလွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း လောလောဆယ် အတော် အလုပ်များနေပါတယ်။
ကျနော် မေးစရာလေးတစ်ခုရှိလို့ နားနှင့်မနာ ဖဝါးနှင့်ပါခင်ဗျား
ကျနော်ဟာ စိတ်သာကပြင်းပြပြီးတော့ လက်တွေ့မလုပ်ဖူးသေးတဲ့သူပါခင်ဗျာ.
အဲဒါကြောင့်ကျနော်ဟာ လက်နဲ့ဖြေဖျောက်တာများပါတယ်ခင်ဗျာ အဲဒါကြောင့်လား
မသိပါဘူး ကျနော်လိင့်တံဟာ နည်းနည်းဘေးကိုကိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျား အဲဒါကို
ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲခင်ဗျာ။ြ့ပီးတော့ လက်နဲ့ဖြေဖျောက်တာဟာ မိန်းမရတဲ့အခါမှာ
ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသလားခင်ဗျား၊ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံခါနီးနှင့် ဆက်ဆံ
ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာ မဖြစ်မနေလိုက်နာရမဲ့ အချက်တွေရှိရင် လမ်းညွှန်ပေးပါလားခင်ဗျား၊
ကျနော်တို့လို လူပျိုတွေပေါက်တွေ အနေနဲ့ကော လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို
ဟာတွေကို အဓိထားလိုက်နာသင့်ပါသလဲခင်ဗျား၊ လူငယ်တွေ အကျိုးများအောင်
Aye chan naing permalink
dragon part kya taw ballo lote tar lal sayar
black bird permalink
ဂေါလီထည်တာ တစ်ကယ်အဓိပ္ပါယ် မရှိတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကြီးဆေးထိုးတာမှာ ပြသ၁နာ ရှိမရှိတော့ သိချင်ပါတ
ယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေကကြီးမှ ကြိုက်တာလို့ ပြောတာ
အဲဒါ အန္ဒရယ် ရှိပါသလား သိပါရစေ ခင်မျာ။
ဖတ် ဖတ် ဖတ်… သည်ထဲမှာ ဒါတွေ ရေးပြီးသားပါ။ ရှာဖတ်လိုက်ပါ။
မှန်ပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိသူ sexကိစ္စကို လိုက်စားသူတွေမှသာ ဒါမျိုးလုပ်ကြမှာပါ။
Saiyan Naing permalink
ANTIBIOTIC3Time
လူဆိုတာ မှားတတ်သူချည်းပါပဲ။ အမှားအပေါ်မှာ သင်ခန်းစာယူလိုက်ရင်းနဲ့ ဘဝကို ဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
မိနစ် ၂၀ လောက်သာရှိပါသေးတယ်
Jinx Love permalink
ကိုယ့်ဟာကို အသာဖြေတဲ့အခါမှာ သုတ်ကိုအပြင်မထုတ်ဘဲ အထဲမှာပြီးသွားမယ်ဆိုရင် ဆိုးကျိုးရှိပါလား
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေပေးပါဆရာ သိချင်လို့